Uptick — Steemkr
goldbloger140 in esteem
နှင့်မယ့်အကြီးမားဆုံးသူတွေကို - နှစ်တစ်ထောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့မြို့ကြီးများမှရွေ့လျားနေကြသည်။ နယူးယောက်စီးတီးနှင့် Los Angeles မြို့နှင့်တူသောနေရာများနှစ်တစ်ထောင်သံလိုက်ဆက်လက်တည်ရှိနေစဉ်, အိမ်ခြံမြေဆန်းစစ်မှုကုမ္ပဏီ RCLCO ကနေသုတေသနပြုဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်, VA မှသေးငယ်မြို့များကိုပြသသည်။ Riverside မှ, ကာလီဖိုးနီးယားရန်။ , တကယ်တော့ 25 ဟာသူတို့ရဲ့လူဦးရေအတွက်အများဆုံးဆွေမျိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုမြင်လျှင်နေကြတယ် စီစဉျ-34 နှစ်အရွယ်။ နှစ်တစ်ထောင်အတွင်းဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေရဲ့ uptick - ထိုမက်ထရိုဧရိယာ၌ 2015 မှ 2010 ကနေ 16% တိုး - ဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်,-Norfolk နှင့် Newport သတင်းများပါဝင်သော Bryan Stephens, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ Hampton လမ်းများကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌမှအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက, Stephens '' ဌာနဒေသတွင်းအသက်ရှင်အလုပ်နှင့်မိသားစုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရာအရပျစေမယ်လို့အဘယ်အရာကိုဒေသခံနှစ်တစ်ထောင်မေးတယ်။ စစ်တမ်းရဲ့ရလဒ်များကိုမှတုန့်ပြန်မှာမြို့သည် 2011 ခုနှစ်စတင်သော-Norfolk အလင်းရထားလမ်း, သက်တမ်းတိုးရေးအဖြစ်အသစ်သောစားသောက်ဆိုင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်မြို့စင်တာများ revamping အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ "အဲဒီအားလုံးသည်တမင်တကာအတိတ်နှစ်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး" Stephens ကပြောပါတယ်။ (ဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်လည်းများလွန်းအငြိမ်းစားများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအိမ်မှာဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။ ) 11 မြို့ကြီးများတစ်ကျဆင်းမှုကိုမြင်လျှင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 50 မက်ထရိုဒေသများ၏အများစုမြို့ပြစင်တာများ, 2015 မှ 2010 ကနေအနှစ်တစ်ထောင်အတွင်းတိုးကိုမြင်တော်မူ၏။ 29,774 2010 ကနေ 2015 ကိုထည့်သွင်းသို့သော်သာအောက်ပါစာရင်းတွင်၏အောက်ခြေတွင်နယူးယောက်အားမရ, တစ် 2.5% uptick ကိုယ်စားပြုကြောင်းနှင့်အတူနယူးယော့ခ်စီးတီး,
နှစ်တစ်ထောင်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးလာပါသည်။ အချိန် Inc ကိုရဲ့ Looking Forward စီးရီးထဲကနေပိုပြီးဆောင်းပါးများအတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ မြို့ပြနှင့်ဆင်ခြေဖုံးနှစ်ဦးစလုံးဒေသများများအတွက်နှစ်တစ်ထောင်လူဦးရေပြောင်းလဲမှုကိုမြင်မြေပုံပေါ်တွင်စက်ဝိုင်းပျံဝဲသို့မဟုတ်ထိပုတ်ပါ:
nhang m ae aakyeemarrsonesuutwayko - nhait taithtaung aamayrikatite rae myahoetkyeemyarr mha rwaelyarr naykyasai . nayuuyout hceeteenhaint Los Angeles myahoet nhang tuusaw nayrarmyarr nhait taithtaung sanlite saatlaat taishi nayhcain, aainhkyaanmyay saannhcait mhukumpane RCLCO k nay sutaysanapyu bar gyaee nee yarr sell saungpyin, VA mha sayy ngaal myahoetmyarr ko pya s sai . Riverside mha, karlehpoeneeyarr raan . , takaaltot 25 har suuthoetrae luu u ray aatwat aamyarrsone swaymyoe toetaatmhunhuann ko
myinshinnaykyataal hcehcanyya-34 nhaitaarwal . nhait taithtaung aatwin bar gyaee nee yarr kamhkyayrae uptick - hto maat ht ro eriyar 2015 mha 2010 kanay 16% toe - bar gyaee nee yarr sell saungpyin,-Norfolk nhaint Newport satainnmyarrparwainsaw Bryan Stephens, hceepwarrrayy nhaint kuusaann raunggeat Hampton lammyarr konesaikyeemyarr aasainn ukkatht mha aan sya hcarar mashipar hpyitpartaal . lwanhkaesaw nhaitpaunggmyarrhcwar k, Stephens '' htarn daysatwin aasaatshin aalote nhaint misarrhcu pyuhcupyoehtaung hphoet k popyee swalsaungmhu rarar pya hcay maallhoetabhaalaarar ko daysahkan nhait taithtaung mayytaal . hcaittam rae raladmyarrko mha tu ant pyan mhar myahoetsai 2011 hkunhait hcatainsaw-Norfolk aalainn rahtarrlam, saattamtoerayy aahpyit aasait saw hcarrsoutsine hpwanhpyaoe sell nhaint myahoethcaintarmyarr revamping aarronehcite larhkaesai . " aellde aarrlonesai tamaintakar aatate nhaitaanaeengaal pyaungglell hkaepyee" Stephens k pyawwpartaal . ( bar gyaee nee yarr sell saungpyin laee myarr lwann aangyaaimhcarr myarraatwat swalsaungmhu aainmhar hpyithkyinn myarraatwat gun satainnrashi htarr pyeeparpye . ) 11 myahoetkyeemyarr tait kyasainnmhu ko myinshin hcainhkwalhkyamhcatehpyaar 50 maat ht ro days myarreat aamyarrhcu myahoetpya hcaintarmyarr, 2015 mha 2010 k nayanhait taithtaung aatwin toe ko myin tawmuueat . 29,774 2010 kanay 2015 ko htany swin shoetsaw sar aoutpar hcarrainntwin eat aouthkyaytwin nayuuyout aarrmar, tait 2.5% uptick kohcarrpyu kyaungg nhaint aatuu nayuuyot hk hceetee, nhait taithtaung eat hcuhcupaungg aarayaatwatakyee myat sone larparsai . aahkyane Inc korae Looking Forward hceeree htellk nay popyee saunggparrmyarr aatwat inayrarko nhaiutpar . myahoetpya nhaint sainhkyayhpone nhait u hc lone daysamyarr myarraatwat nhait taithtaung luu u ray pyaungglellmhu ko myin myaypone pawtwin hcaatwine pyaanwell shoetmahote hti pote par: